Uyenza njani i-Header Image kwiBhlog yakho ye-WordPress
Inqaku elikhulu lomxholo wamashumi amabini aneshumi elinambini kwiWordPress ngumlayishi wentloko, ekuvumela ukuba ulayishe imifanekiso emitsha kunye neyodwa eyintloko yesihloko sewebhusayithi yakho yeWordPress.
Ubungakanani bentloko yakho ebunjiweyo ubuncinci ziiphikseli ezingama-960 ububanzi kunye nee-pixels ezingama-250 ukuphakama. Ukuba ifoto yakho inkulu kunaleyo, ungayityala emva kokuba uyilayishe kwiWordPress, nangona ukusika umfanekiso ngenkqubo yemizobo (njengeFotohop) yeyona ndlela yokufumana iziphumo ezichanekileyo.
Amashumi amabini aneshumi amabini alayishwe ngaphambili kunye nemifanekiso engasentla yesibhozo, kodwa iWindowsPress ikuvumela ukuba ulayishe eyakho. Ukufaka i-graphic header yesiqhelo, landela la manyathelo:
uyisebenzisa njani ityuwa ye-epsom
1KwiDashboard yeWordPress, cofa indawo yekhonkco kwimenyu yokuBonakala.
Kwiphepha lesihloko seNtloko, iisetingi zomfanekiso wentloko ziyavela.
MbiniCofa iqhosha lokuKhangela kwiCandelo loMfanekiso.
Khetha ifoto oyikhethileyo kwibhokisi yencoko.
ungathatha ibuprofen ngecyclobenzaprine
3Cofa iqhosha lokuvula.
Eli nyathelo lihambisa umfanekiso kwi-hard drive yekhompyuter yakho ukuya kulawulo lwakho lokufakwa kweWindowsPress kwaye ulayishe iphepha leNhloko yeNtloko.
4(Ngokuzithandela) Sika umfanekiso ngendlela oyithandayo.
Ukwenza ubungakanani kwakhona kunye nokutyala umfanekiso wakho, tsala enye yeebhokisi ezisibhozo ezibekwe kwiikona nakumbindi wecala ngalinye lomfanekiso. Unokucofa ngaphakathi komfanekiso kwaye uhambise wonke umfanekiso phezulu okanye ezantsi ukuze ufumane ukubekwa ngokukuko kunye nefuthe lokulima olifunayo.
5Cofa indawo ethi Crop and Publish xa uthe wayicofa intloko yakho.
Okanye ucofe i-Skip Cropping, Papasha umfanekiso njengeqhosha.
Iindleko eziphindiweyo nge-inshurensi
yintoni ifayile ye .sav
mupirocin ngaphezulu kwee-walgreens
Ngaba ibuprofen inciphisa umkhuhlane kubantu abadala
Umlinganiselo we-tamiflu wabantwana